Iindaba - Umahluko phakathi kweSilk kunye neMulberry Silk
Umahluko phakathi kwesilika kunye neMibhilili yeSilika
Umahluko phakathi kweSilk kunye neMulberry Silk
Emva kokunxiba isilika iminyaka emininzi, uyayiqonda nyani isilika?
Ngalo lonke ixesha uthenga iimpahla okanye iimpahla zasekhaya, umthengisi uya kukuxelela ukuba le yintsimbi yesilika, kodwa kutheni le nto ililaphu elinobunewunewu ngexabiso elahlukileyo? Nguwuphi umahluko phakathi kwesilika kunye nesilika?
Ingxaki encinci: yahluke njani isilika kwisilika?
Ngapha koko, isilika inento yokwenza nesilika, kulula ukuyiqonda umahluko. Isilika inesilika, kodwa kukwakho neentlobo zesilika. Ukuba kunzima ukwahlulahlula, banokwahlulwa kuphela kwicandelo lefayibha.
Kwisinxibo esidibana noluntu ngokubanzi, kuhlala kusithiwa le lokhwe yenziwe ngelaphu lesilika, kodwa xa kuvavanywa ukwenziwa kwesambatho, isilika = i-100% yesilika yemibhaka. Oko kukuthi, ingakanani isilika equlethwe kwisilika.
Ewe kunjalo, ukongeza kwizinto zesilika, zininzi nezinye iimpahla eziluhlaza. Siyazi ukuba zininzi iintlobo zesilika, ezinje ngesilika yebulberry, iShuanggong mulberry silk, isilikhi ecinezelweyo, kunye nesilika yasezulwini. . Iililika ezahlukileyo zinamaxabiso ahlukeneyo kwaye zineempawu ezahlukileyo, kwaye amalaphu esilika kunye nosilika ongezelelweyo ane-luster ekhethekileyo "ecekeceke", ukuziva ugudile, ukhululekile ukunxiba, ubutofotofo kwaye umhle.
Esona sithako sesilika yenye yemicu yezilwanyana, kwaye eyona nkqubo yokwaluka yakudala yesilika yethu eqhelekileyo isebenzisa kakhulu isilika yebulberry, ekwabizwa ngokuba yi "real silk".
Isilika inokubhekisa kwisilika, kodwa ayizibandakanyi ezinye iintsinga zeekhemikhali kunye namalaphu esilika aneempawu ezahlukileyo zefayibha yokudibanisa.
Emva kokuqhubela phambili ngokuqhubekayo kobugcisa bokuluka, abantu bongeze izinto ezahlukeneyo zelaphu, ukuze ubume kunye nokumila kwesilika kwahluke kakhulu, kwaye nelaphu ngokwalo libonakala ngeliso lenyama lineendlela ngeendlela zokubonisa.